Bulchiinsi Traamp ammas loltoota dabalataa 1500 gara Baha Jiddu Galaa erguuf murteesse - NuuralHudaa
Bulchiinsi Traamp ammas loltoota dabalataa 1500 gara Baha Jiddu Galaa erguuf murteesse
Last updated May 25, 2019 1
Ameerikaan torbaan lamaan dabran keessa Markabootaa fi xiyyaarota waraanaa akkasumas loltoota hedduu gara naannichaatti erguu isii gabaafamee ture. Ammas prezdaant Traamp loltoonni 1500 dabalataan gara naannichaatti erguuf kan murteesse tahuu CNN gaabase.
Gabaasa kana hordofuun ministeerri haajaa Alaa Iiraan Javaad Zaarif Sabtii har’aa ibsa kenneen, Ameerikaan waraana dabalataa gara naannichatti erguun isii, nageenya naannichaa booressuun alatti bu’aa tokkollee hin qabu jedhe. Zaarif itti dabaluudhaanis, “biyyoonni addunyaa Ameerikaan sochii hamaa kana hatattamaan akka dhaabdu godhuu yoo hin dandayin, Traamp addunyaa guutuu balaa keessa galchaa jira” jechuun akeekkachiise.
Khamiisa dabre Prezdaantiin Iraan Hasan Ruhaanii, Ameerikaan meeshaalee biyyi isaa ala irraa galchitu ugguruu yoo kan itti fuftu tahe, Iraan Sulula galaana Hormuz kan cuftu tahuu hime. Akeekkichiisa kana hordofuun Traamp fuula Twitter isaa irratti, “Iraan gocha hamaa akkasii keessa kan galtu yoo tahe, tarkaanfiin Ameerikaan Iraan irratti fudhattu ammoo kan seenaa addunyaa keessatti kanaan dura hin mul’atin taha” jedhe.
May 20, 2022 sa;aa 5:45 pm Update tahe